Bracewell seals dramatic win over Zimbabwe - ABC News (Australian Broadcasting Corporation)
Bracewell seals dramatic win over Zimbabwe
Updated November 06, 2011 08:56:43
Photo: Doug Bracewell's five-wicket haul on debut sent Zimbabwe crashing in the final session of the one-off Test match. (Jekesai Njikizana: AFP)
Doug Bracewell's five-wicket debut haul crushed a spirited effort from Zimbabwe as New Zealand won the one-off Test match by 34 runs in Bulawayo on Sunday morning.
It was a heartbreaking end for Zimbabwe, who had threatened to complete the highest run chase in its history as captain Brendan Taylor led from the front with a superb hundred, only for Bracewell's 5 for 83 to turn the match.
The captain was ably assisted by half-centuries from Tino Mawoyo and Tatenda Taibu, but ultimately Zimbabwe's long tail proved costly as it lost its last seven wickets in the final session.
Zimbabwe began the day on 2 for 61 in pursuit of 366 for victory, but by tea had progressed to 3 for 265 - just 101 runs from its target - and the win looked well within its grasp.
First posted November 06, 2011 08:26:35